Health | Narinepal | Page 2
एक व्यक्तिको यौन अङ्ग अर्को व्यक्तिको मुखको सम्पर्कमा ल्याई गरिने यौन क्रियाकलापलाई नै मुखमैथुन अर्थात् oral sex भनिन्छ। कतिपय व्यक्तिका लागि यो निकै सुखदायी तथा आकर्षक हुन्छ भने कतिका लागि एकदमै विकर्षक। नेपालमा राम्रोसँग अध्ययन हुन बाँकी रहे पनि मुखमैथुनबाट यौन आनन्द पाउन रुचाउने व्यक्ति वा जोडीहरू यथेष्ट मात्रामा भएका उदाहरण हाम्रो सम्पर्कमा आउँछन्। मानव यौनसम्पर्कलाई नियालेर हेर्ने हो भने कतिपय दम्पतीका बीच मुखमैथुनको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ।
महिला रोग लाग्नाका कारणहरु
१. शारीरिक बनावटको कारण हाम्रो रोगको घर बनाउने योनी नै मुख्य श्रोत हो । हाम्रो शरिरबाट योनीद्धार हुँदै चौविसै घण्टा फोहोर शरिर बाहिर निस्किरहन्छ र फोहोर लुक्ने र सड्‍ने योनीका छेउछाउ प्रसस्त चेपाचेपी हुन्छ र सोही चेपाचेपीका फोहोरबाट हाम्रो शरिरमा रोगका किटाणु उत्पन्न भई हाम्रो शरिरभित्र योनीद्धार हुँदै रोगका किटाणु हाम्रो शरिर भित्र प्रवेश गर्छन् । त्यसपछि हामी रोगी हुन्छौं । योनी सफा गर्ने तरिकै सिकाएको छैन ।
२. तातो दुधपानीले सेक्दा अनुभव भएको हो । हाम्रो खाने मुखबाट भन्दा सयौं गुणा बढी राम्रो-नराम्रो प्रतिक्रिया शरिरमा देखाउने शक्ति हाम्रो योनीमा हुन्छ । उमालेर मिश्रण तयार गर्ने जलयोगको पानीमा, १ चम्चा शुद्ध घिउ राखेर तयार गरेको पानीमा बसेर जलयोग गरे शरिरमा पोशिलो तत्व पनि बढ्‍दै जान्छ । बोसो बढि भएको शरिर भए घिउ नराख्नु होला । प्रष्टै थाहा हुन्छ ।
पहिलो सर्म्पर्कमा किन रगत आएको होला ??
अण्डकोष (अण्डाशय) पुरुषमा भएको एक प्रमुख प्रजनन अङ्ग हो र यसले शुक्रकीट तथा पुरुषत्व प्रदान गर्ने हार्मोनको उत्पादन गर्छ। यो लिङ्गको फेदनिर झुन्डिएको छालाको पातलो थैली (अण्डकोष थैली) भित्र हुन्छ। अण्डकोष र अण्डकोष थैली फरक कुरा हुन् भन्ने कतिपय व्यक्तिलाई थाहा नहुन सक्छ। स्वाभाविक रूपमै यी दुई अङ्ग दुख्ने कारण केही फरक हुन्छ। तपाईंले अण्डकोष सुन्निएको छ कि छैन लेख्नुभएको छैन। तपाईंलाई थाहै होला, यस्तै १०-११ वर्षको उमेरदेखि अण्डकोषको विकास सुरु हुन्छ र किशोरावस्थाभरि यो बढ्ने क्रम निरन्तर चल्छ। यसको आकार अलि चेप्टो अण्डा आकारको हुन्छ। सालाखाला १० देखी १४ ग्राम तौल भएको यो अङ्गको आयतन सालाखाला ४ह३ह२ दशमलव ५ सेन्टिमिटर हुन्छ। यसभन्दा केही बढी र केही कम हुनु पनि सामान्य नै हो।
यौन सम्पर्कको मर्म वा सही एवं ग्राहृय अर्थ हो प्रेम गर्नु, केही दिनु चाहनु विश्वास गर्नु एवं समर्पित हुनु । यसले वैवाहिक जीवनमा अन्तरंगताको भावना सञ्चार गर्छ नै, साथै दुई विपरीत लिङ्गीबीच आत्मीयता एवं प्रगाढता पनि बढाउँछ ।
विवाहपछि शारीरिक समपर्ण वा विलयले दुई अस्तित्वलाई जुन उचाइमा पुर्‍याउँछ, त्यो कुनै आध्यात्मिक अनुभूतिभन्दा कम हुंदैन । यसले विवाहित दम्पत्तीका सुमधुर सम्बन्धलाई सार्थकता प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । विवाह पश्चात् निष्ठा एवं प्रतिवद्धताको प्रमाण शारीरिक मिलनले दिन्छ । यो मिलनले दुवैलाई गहिराइमा जोड्छ । जीवनका अनेकन उतार चढावका बखत दुई क्लान्त शरीर एक अर्काको सामीप्यमा पुनर्जीवित हुन पुग्छन् ।